Fanaaniinta Warshadaha, Generator Gaaska, Qalabka Awoodda Combo - Bejarm
Teknolojiyada Bejarm waxay diiradda saaraysaa taageereyaasha warshadaha, iyagoo ku siinaya xalka ugu fiican ee qaboojinta ee loogu talagalay booska ballaaran. Wax soo saarka Bejarm wuxuu ku saleysan yahay tikniyoolajiyadda mootada iyo warshadaynta, taas oo horseedaysa tayada ugu sareysa arimahan. Sidaa darteed, waxaa si xoog leh lagula talinayaa inta badan macaamiisha.
Bejarm wuxuu leeyahay koox xirfadlayaal ah R & D, kuwaa oo ku howlan cilmi baarista iyo horumarinta matoorrada aaladda iskuxiran ee magnet-ka ee joogtada ah in ka badan 17 sano. Waxaan haynaa dhowr shati abuuris iyo dhowr shahaado oo caalami ah. Qaybaha asaasiga ah ee taageereyaasha warshadaha magnetka joogtada ah dhammaantood waxay xaqiijiyeen wax soo saar madax bannaan…
17 Sanadaha +
12000 m2 Dhir
8 Kormeerka Tayada
Tayada sida xudunta
Bejarm wuxuu ku adkeysanayaa soosaarida wax soo saar tayo sare leh oo warshadeed oo heer-warshadeed ah, taasoo ka dhigaysa wax soo saarkaaga warshadaha mid aad ugu habboon, ka waxtar badan oo ka dhaqaale badan.
Kordhi wax soo saarka
Si loo hagaajiyo waxtarka wax soo saarkaaga warshadaha, waxaan sii wadeynaa hagaajinta habka wax soo saarka badeecadaheena.
Adeeg qaas ah oo qaas ah
Waxaan ku dadaali doonnaa sidii aan u dabooli lahayn baahiyaha kala duwan ee loo habeeyay waxsoosaarkaaga warshadaha